သင်၏ကုမ္ပဏီမှနည်းပညာကိုမည်သူသတ်မှတ်သနည်း။ | Martech Zone
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, ဇူလိုင်လ 8, 2009 တနင်္ဂနွေ, ဖေဖော်ဝါရီလ 9, 2014 Douglas Karr
လွန်ခဲ့သောအချိန်ကကျွန်ုပ်က“သင့်ရဲ့အိုင်တီဌာနဆန်းသစ်တီထွင်မှုကိုသတ်ဖြတ်ခဲ့လျှင်“ ဒါဟာအတော်လေးတုံ့ပြန်မှုတောင်းခံတဲ့မေးခွန်းပဲ! IT ဌာနအတော်များများသည်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုကိုထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းရှိသလား။ IT ဌာနများသည်ကုန်ထုတ်စွမ်းအားနှင့်ရောင်းအားများကိုပင်ထိန်းချုပ်နိုင်ပါသလား။
ဒီကနေ့ခရစ်နဲ့တွေ့ဆုံခွင့်ရခဲ့တယ် အကျဉ်းချုပ်။ ဒါဟာစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့စကားပြောဆိုမှုဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဟာ ၄၅ မိနစ်လောက်ကြာအောင်ကျွန်မတို့ဆန္ဒရှိတဲ့နေရာကိုသွားခဲ့တယ်။
စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောစကားဝိုင်းတစ်ခုမှာပလက်ဖောင်းသို့မဟုတ် SEO ၀ န်ဆောင်မှုများ ၀ ယ်ရန်ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုမည်သူပိုင်ဆိုင်သည်ကိုဆွေးနွေးခြင်းဖြစ်သည်။ အဲဒီဆုံးဖြတ်ချက်ဟာအိုင်တီကိုယ်စားလှယ်တစ်ယောက်လက်ထဲရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာငါတို့နှစ် ဦး စလုံးကစိတ်သက်သာရာရသွားကြတယ်။ အိုင်တီပညာရှင်များကိုဂုဏ်သိက္ခာရှိရှိဆက်ဆံရန်ကျွန်ုပ်သည်ကြိုးပမ်းနေသည်မဟုတ်ပါ - ကျွန်ုပ်သည်သူတို့၏ကျွမ်းကျင်မှုကိုနေ့စဉ်အခြေခံပြီးအားထားပါသည်။ SEO အတွက် blogging ခဲလေးလည်းများအတွက်မဟာဗျူဟာဖြစ်ပါတယ် ... တစ် စျေးကွက်ရှာဖွေရေးတာဝန်.
သို့သော်အိုင်တီဌာနသည်စီးပွားရေးရလဒ်များကိုဆုံးဖြတ်သည့်ပလက်ဖောင်းတစ်ခုသို့မဟုတ်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုမကြာခဏတာဝန်ယူရသည်ကိုစိတ်ဝင်စားသည်။ မကြာခဏဆိုသလိုကျွန်ုပ်သည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရလဒ်များကို (ဆန်းသစ်တီထွင်မှု၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပြန်လည်ရရှိခြင်း၊ အသုံးပြုရန်လွယ်ကူခြင်းစသည်ဖြင့်) သည်ဝယ်ယူရေးဆုံးဖြတ်ချက်တွင်နောက်ကျကျန်နေသည်ကိုတွေ့ရသည်။
ကျွန်တော်တို့ကိုသူတို့ရဲ့ကော်ပိုရေးရှင်းဘလော့ဂ်ပလက်ဖောင်းအဖြစ်ရွေးချယ်တဲ့အခါအိုင်တီဌာနကသူတို့ဟာသူတို့လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်တယ် အခမဲ့ blogging များအတွက်ဖြေရှင်းချက်။ ဘလော့ဂ်ဆိုတာဘလော့တစ်ခုလား။
ကိစ္စမရှိပါဘူး ပလက်ဖောင်းသည်လုံခြုံမှု၊ တည်ငြိမ်မှု၊ ထိန်းသိမ်းမှုကင်းမဲ့သော၊ မလိုအပ်သောစသည်တို့မဟုတ်ကြောင်း
ကိစ္စမရှိပါဘူး ၎င်းကိုတည်ဆောက်ခဲ့သောကုမ္ပဏီသည်အကောင်းဆုံးသောအလေ့အကျင့်များနှင့်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်လိုက်နာမှုကိုသေချာစေရန်အတွက်သုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ဒေါ်လာထောင်နှင့်ချီ။ သုံးစွဲခဲ့သည်။
ကိစ္စမရှိပါဘူး အသုံးပြုရန်အတွက်မည်သူမဆိုအသုံးပြုရန်အတွက်လွယ်ကူသည်၊ အထူးကြပ်မတ်လေ့ကျင့်ရန်မလိုပါ။
ကိစ္စမရှိပါဘူး စနစ်သည်အလိုအလျောက်ဖြစ်ကြောင်း၊ ထို့ကြောင့်တံဆိပ်ကပ်ခြင်းနှင့်အမျိုးအစားခွဲခြားခြင်းဆိုင်ရာအသိပညာမလိုအပ်ပါ။
ကိစ္စမရှိပါဘူး ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ထမ်းများကသူတို့၏ဖောက်သည်များ၏တိုးတက်မှုကိုစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးသည်။
ကိစ္စမရှိပါဘူး ဘလော့ဂါများအနေဖြင့်သူတို့၏ကျွမ်းကျင်မှုများတိုးတက်လာစေရန်နှင့်အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများအပေါ်ပြန်လည်အကျိုးအမြတ်တိုးမြှင့်ပေးရန်ကူညီရန်အတွက်၎င်းသည်ပလက်ဖောင်းပေါ်တွင် ဆက်လက်၍ နည်းပြများဖြင့်လာသည်။
SEO ဆိုသည်မှာမကြာခဏတူညီသောငြင်းခုံမှုဖြစ်သည်။ ငါပြောတာက SEO အငြင်းပွားမှုရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ပဲ SEO ကျွမ်းကျင်သူမလိုပါဘူး။ ဂျယ်ရမီကဒီ post ကိုငါ့ကိုသတိပေးခဲ့သည်။
ကျနော့်အချက်ကတော့ကုမ္ပဏီတော်တော်များများမှာရှာဖွေရေးအင်ဂျင်သင့်မြတ်မှုမရှိတဲ့အတွက်သက်ဆိုင်ရာအသွားအလာတော်တော်များများမှာပျောက်ဆုံးနေတာပါပဲ။ သူတို့ပဲပြုလျှင် အနည်းဆုံးသူတို့အနည်းဆုံးသူတို့ ၁၀ ဒေါ်လာကုန်ကျခဲ့သောလှပသော site ကို visitors ည့်သည်အနည်းငယ်ရှေ့တွင်ထားနိုင်သည်။ ဒီ post ကိုယှဉ်ပြိုင်မှုနှင့်အကောင်းမြင်မှုမရှိသောကုမ္ပဏီအများစုအတွက်ရေးသားခဲ့သည်။ အနည်းဆုံးလုပ်ရန်အသနားခံခြင်းဖြစ်သည်။
အပြိုင်အဆိုင်ရှိသောစက်မှုလုပ်ငန်းများမှကုမ္ပဏီများအတွက်မူ ၈၀% ပိုကောင်းအောင်လုပ်ခြင်းသည်မနီးစပ်ပါ။ ၉၀% ကမလုံလောက်ဘူး အဆင့်မြင့်ယှဉ်ပြိုင်မှုဆိုင်ရာအဆင့်တွင်အဆင့် ၁ ရရှိရန်ကမ္ဘာပေါ်ရှိလက်တဆုပ်စာကုမ္ပဏီတစ်ခု၏ကျွမ်းကျင်မှုလိုအပ်သည်။ အသင့်အတင့်သာယှဉ်ပြိုင်နိုင်သည့်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်၏ရလဒ်စာမျက်နှာပေါ်တွင်သင်ရောက်ရှိနေပါကသင်၏ IT ဌာနသည်သင့်အားနံပါတ် ၁ သို့မသွားနိုင်ပါ။ အကယ်၍ သူတို့သည်သင့်ကိုရလဒ်၏ပထမစာမျက်နှာတွင်ပင်တွေ့လျှင်သင်ကံကောင်းလိမ့်မည်။
သင်၏ IT ဌာနကိုသင်၏အရောင်းအဖွဲ့ကိုတာဝန်မယူပါ။ သို့သော်သင်၏ကုမ္ပဏီအားအရောင်းအ ၀ ယ်မဖြစ်စေရန်တားဆီးနိုင်သောနည်းပညာကိုသင်တာဝန်ယူပါမည်။ အကယ်၍ သင်သည်နည်းပညာကိုလက်တွေ့အသုံးချတော့မည်ဆိုပါကသင်တစ်ယောက်တည်းလုပ်နိုင်သည်ဟုမထင်မီအခွင့်အလမ်းများနှင့်အားသာချက်များကိုအပြည့်အဝစုံစမ်းစစ်ဆေးပါ။
10:2009 pm တွင်ဇူလိုင်လ 2, 21
ဘလော့ဂ်ရေးခြင်းကြားတွင် ခြားနားသော ကမ္ဘာတစ်ခုရှိသည်။ ပလက်ဖောင်း နှင့် SEO တစ်ခု ဗျူဟာ.
ဘလော့ဂ်ရေးပလပ်ဖောင်းသည် ဆော့ဖ်ဝဲလ်နှင့် ဟာ့ဒ်ဝဲပေါင်းစပ်မှုတစ်ခုသာဖြစ်ပြီး အိုင်တီဌာနများသည် ၎င်းတို့ကို ပေါင်းစည်းရာတွင် အလွန်ကောင်းမွန်ပါသည်။ ၎င်းတို့တွင် တစ်ဦးတည်းပိုင် ဆော့ဖ်ဝဲလ်ရှိခြင်းကြောင့်ဖြစ်စေ၊ ၎င်းတို့တွင် ပိုင်ဆိုင်ထားပြီးဖြစ်သည့် သို့မဟုတ် ငှားရမ်းထားခြင်းကြောင့်ဖြစ်စေ၊ ဤအထူးသဖြင့် IT stack ကို ထိန်းသိမ်းရာတွင် ကျွမ်းကျင်မှုများစွာရှိသောကြောင့် ဤလုပ်ငန်းကို လုပ်ဆောင်သည့် ရောင်းချသူအများအပြားလည်း ရှိပါသည်။ အိမ်တွင်းလူများနှင့် ပြင်ပလူများကြားတွင် သင့်ဘလော့ဂ်ပလက်ဖောင်း၏ စီမံခန့်ခွဲမှုကို သင်မည်ကဲ့သို့ ကွဲပြားစေသနည်းဟူသော မေးခွန်းမှာ "ဝယ်/ဆောက်/ချေး" အိုင်တီပြဿနာဖြစ်သည်။
သို့သော် SEO နည်းဗျူဟာတစ်ခုသည် သင့်ဘလော့ဂ်ပလပ်ဖောင်းနှင့် လုံးဝနီးပါး အမှီအခိုကင်းသည်။ ပလက်ဖောင်းမခွဲခြားဘဲ သင့်တွင် ကြီးကျယ်သော သို့မဟုတ် ကြောက်မက်ဖွယ် SEO ရှိသည်။ ဒါပေမယ့် SEO ကုမ္ပဏီကို အသုံးပြုတာကတော့ မဟုတ် Third-party IT ကုမ္ပဏီကို အသုံးပြုသလိုမျိုး။ ၎င်းသည် သင့်စိတ်ကူးများကို Google ဘာသာစကားသို့ ဘာသာပြန်နိုင်သည့် ကော်ပီစာရေးဆရာများကို ငှားရမ်းခြင်းနှင့် ပိုတူသည်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ သင်သည် အခမဲ့ open source ဘလော့ဂ်ဆော့ဖ်ဝဲကို သုံးနိုင်သည်။ တရားမျှတပါစေ၊ Doug—WordPress သည် လုံခြုံမှု၊ တည်ငြိမ်ပြီး အလွန်မလိုအပ်သော အခြေခံအဆောက်အဦများပေါ်တွင် လုပ်ဆောင်ပါသည်။ WordPress အသုံးပြုသူများသည် Dow Jones၊ The New York Times၊ People Magazine၊ Fox News နှင့် CNN တို့ ပါဝင်သည်—အားလုံးသည် သင်၏ "စာမျက်နှာကြည့်ရှုမှု သန်းနှင့်ချီသော၊ အသုံးပြုသူ သောင်းနှင့်ချီသော" စမ်းသပ်မှုကို ကျော်ဖြတ်ကြသည်။ Automattic (WordPress ကို ဖန်တီးတဲ့သူတွေ) မှာ သန်းဆယ်ဂဏန်းရှိတယ်။ အကျိုးတူရန်ပုံငွေတော်တော်ကျယ်ပြန့်တဲ့ သုတေသနနဲ့ အင်ဂျင်နီယာဘတ်ဂျက်နဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတယ်လို့ ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ WordPress သည် ကစားစရာမဟုတ်ပါ။
သို့သော် WordPress သည် ဘလော့ဂ်ရေးပလပ်ဖောင်းတစ်ခုမျှသာဖြစ်သည်။ တကယ်တော့ ဒါဟာ သက်သက်ပါ။ တဝက် ဘလော့ဂ်ပလပ်ဖောင်း—အဖွင့်-အရင်းအမြစ် WordPress ဆော့ဖ်ဝဲလ် ( WordPress.com အပါအဝင် မရေမတွက်နိုင်သော WordPress hosting ဝန်ဆောင်မှုများ ရှိသော်လည်း) ယုံကြည်စိတ်ချရမှု သို့မဟုတ် အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ သင်စိတ်ဝင်စားပါက သက်ဆိုင်ရာ ဟာ့ဒ်ဝဲနှင့် ကျွမ်းကျင်မှုတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန် လိုအပ်ပါသည်။
ဒါကြောင့် အိုင်တီဌာနက ဘလော့ဂ်တစ်ခုဟာ ဘလော့ဂ်တစ်ခုသာဖြစ်ပြီး ဘလော့ဂ်အပိုင်းကို အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ အခမဲ့ကိရိယာတွေကို သုံးနိုင်တယ်ဆိုတာ မှန်ပါတယ်။ သို့သော် အလုပ်အများစုနှင့် အလားအလာတန်ဖိုးအများစုသည် ဆော့ဖ်ဝဲတွင် မရှိပါ။ ဘလော့ဂ်တစ်ခုရှိခြင်း၏ အလုံးစုံနီးပါးကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်နှင့် စဉ်ဆက်မပြတ် SEO နည်းဗျူဟာဖြင့် ဖြစ်နိုင်ချေရှိသည်။ အဲဒါကို မင်းလိုအပ်တယ်ဆိုတာ မင်းသဘောပေါက်ပြီးတာနဲ့ ဒါဟာ မင်းအတွက် ကျေကျေနပ်နပ် ပေးရမယ့် အရာတစ်ခုပါပဲ။
စိန်ခေါ်မှုမှာ SEO ကောင်းကောင်းသည် လက်တစ်ဆုပ်စာမျှသာမဟုတ်၊ ခက်သည်၊ အမြဲတမ်းပြောင်းလဲနေပြီး ကမ္ဘာပေါ်တွင် ခြားနားချက်အားလုံးကို ဖြစ်စေကြောင်း အိုင်တီဌာနများကို နားလည်လာစေရန် စိန်ခေါ်မှုဖြစ်သည်။
10:2009 pm တွင်ဇူလိုင်လ 2, 52
မင်းငါ့ကိုသဘောတူလား သဘောမတူဘူးလား ငါမသိဘူး။ Dow Jones၊ The New York Times၊ People Magazine၊ Fox News နှင့် CNN တို့သည် WordPress ကို 'နဂိုအတိုင်း' လုပ်ဆောင်ခြင်း မပြုကြောင်း သင်နှင့် ကျွန်ုပ်သိပါသည်။ အပိုထပ်ဆောင်းအခြေခံအဆောက်အအုံကုန်ကျစရိတ်၊ ဆောင်ပုဒ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကုန်ကျစရိတ်၊ ရှာဖွေရေးအင်ဂျင် ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းစရိတ်စသည်ဖြင့် ၎င်းကို လုပ်ဆောင်နေပါသလား။ အဲဒီပလက်ဖောင်းတွေကို အသုံးပြုဖို့ သူတို့ရဲ့ဝန်ထမ်းတွေကို ပညာပေးဖို့အတွက် ပိုက်ဆံသုံးနေတယ်လို့ သင်မထင်ဘူးလား။ သို့မဟုတ် ထိုပလပ်ဖောင်းများသို့ အကြောင်းအရာများ ပေးပို့ရန် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ရှိပါသလား။ ဟုတ်ပါတယ် သူတို့က! ထိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုစီသည် ၎င်းတို့အတွက် 'အခမဲ့' ပလပ်ဖောင်းတစ်ခုပြုလုပ်ရန် ငွေအနည်းငယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားသည်။
ဘလော့ဂ်တစ်ခုသည် ဘလော့ဂ်တစ်ခုမျှသာဖြစ်သော်လည်း ဘလော့ဂ်ရေးပလပ်ဖောင်းသည် ဘလော့ဂ်ပလပ်ဖောင်းတစ်ခုမျှသာ မဟုတ်ပါ။ သော့ချက်စာလုံး ခွန်အားမီတာ၊ တဂ်လုပ်ခြင်း၊ အမျိုးအစားခွဲခြင်းနှင့် Compendium တွင် အကြောင်းအရာနေရာချထားခြင်းတို့သည် ကြီးမားသောကွဲပြားမှုများဖြစ်သည်။ အသုံးပြုသူသည် 'ဘလော့ဂ်လုပ်နည်း' ၊ ၎င်းတို့၏အကြောင်းအရာကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် 'မည်ကဲ့သို့' နှင့် 'ဘလော့ဂ်လုပ်နည်း' နှင့် ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်သောကအချိန်နည်းရန် လိုအပ်ပါသည်။ စီးပွားရေးဘလော့ဂါများသည် ၎င်းတို့၏ သတင်းစကားအပေါ် အာရုံစိုက်သင့်သည် – ၎င်းတို့၏ ပလက်ဖောင်းမဟုတ်ပေ။
မည်သူမဆို Compendium ကိုဖွင့်ပြီး အလိုလို ပို့စ်တင်နိုင်ပြီး ထိုပို့စ်ကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ပြုလုပ်နိုင်မည်ဟု အာမခံပါသည်။ ဒါက WordPress နဲ့ အဆင်မပြေပါဘူး။ WordPress ဖြင့် ဘလော့ဂ်ကို ထိရောက်စွာ ရေးနည်းကို ကျွန်ုပ် ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ သင်ကြားဖူးသူ အများစုသည် ပို့စ်တစ်ခုစီတွင် မည်မျှ ပျောက်ဆုံးနေသည်ကို မသိခဲ့ကြပါ။
တစ်ဖန် IT ဌာန၏ အာရုံစိုက်မှုသည် လုပ်ငန်း၏ အာရုံမဟုတ်ပေ။ ကုမ္ပဏီကို အန္တရာယ်မဖြစ်စေကြောင်း သေချာစေရန် ကျွန်ုပ်၏ IT လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များသည် ကျွန်ုပ်၏ဆော့ဖ်ဝဲလ်ဝယ်ယူမှုများကို 'ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း' ကို အမြဲလေးစားတန်ဖိုးထားပါသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ၊ ပလပ်ဖောင်း သို့မဟုတ် ဗျူဟာ၏ အကျိုးကျေးဇူးများနှင့် လုပ်ငန်းအပေါ် ၎င်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကို ၎င်းတို့ ဘယ်သောအခါမှ အသိအမှတ်ပြုနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ အဲဒါက သူတို့ ပညာတတ်တာ မဟုတ်ဘူး၊ သူတို့ရဲ့ အတွေ့အကြုံက ဘာအတွက်လဲ၊ သူတို့အတွက် အသုံးချသင့်တာ မဟုတ်ဘူး။
စီးပွားရေးသမားတွေက လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်တွေ ချပါစေ။ IT သည် ၎င်းတို့၏ ယုံကြည်ရသော အကြံပေးများ ဖြစ်ပါစေ။
10:2009 pm တွင်ဇူလိုင်လ 4, 32
မင်းရဲ့ ယေဘုယျအချက်ကို ငါသဘောမတူဘူး ၊ သဘောမတူဘူး ၊ မင်းရဲ့ ထင်မြင်ချက်တွေကို ငါရှင်းပြနေတာ။
WordPress ကို အသုံးပြုသူ ကြီးများသည် အပို စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် အခြေခံအဆောက်အအုံ ကုန်ကျစရိတ်များ မပါဘဲ ဆော့ဖ်ဝဲကို အသုံးပြုနေကြသည်ဟု မည်သူမျှ မပြောခဲ့ပေ။ သင်ပြောသည် "ပလက်ဖောင်းသည် စာမျက်နှာကြည့်ရှုမှု သန်းနှင့်ချီ၍ အသုံးပြုသူ ထောင်ပေါင်းများစွာအတွက် အတိုင်းအတာအထိ ချဲ့ထွင်နိုင်မည်မဟုတ်ကြောင်း သတိပြုပါ"ဒါပေမယ့် ဒါဟာ မမှန်ပါဘူး။ WordPress (သို့မဟုတ် Blogger၊ သို့မဟုတ် Drupal သို့မဟုတ် DotNetNuke သို့မဟုတ် Compendium စသည်ဖြင့်) ကို ဤအဆင့်အထိ ချဲ့ထွင်ရန် ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်နိုင်သော်လည်း သင်သည် ဟာ့ဒ်ဝဲ၊ ဆော့ဖ်ဝဲလ်နှင့် နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှုကို ပံ့ပိုးပေးသည့် ဟာ့ဒ်ဝဲတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန် လိုအပ်သည်။ ဟုတ်မဟုတ် မေးစရာ မရှိပါဘူး။ ဖြစ်နိုင်သောသင်ကိုယ်တိုင်လုပ်ချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ် တခြားတစ်ယောက်ယောက်က ကိုယ့်အတွက်လုပ်ပေးစေချင်ရင်ပေါ့။
ဟုတ်တယ်, blogging platform သည် blogging platform တစ်ခုမျှသာဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ဘလော့ဂ်တစ်ခု ဖန်တီးပေးသည့် ဆော့ဖ်ဝဲလ်နှင့် ဟာ့ဒ်ဝဲပေါင်းစပ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ အချို့သောအင်္ဂါရပ်များသည် မတူညီသောအင်္ဂါရပ်များရှိပြီး အဆိုပါအင်္ဂါရပ်များသည် ပို၍တန်ဖိုးရှိပြီး ငွေပိုတန်ဖိုးရှိနိုင်ပါသည်။ သင့်တွင် IndyCar၊ အသွင်အပြင်အပြည့်ရှိသော BMW သို့မဟုတ် ယုံကြည်စိတ်ချရသော ထရပ်ကားဖြစ်စေ သင့်တွင် အမှတ် A မှ အမှတ် B မှ မောင်းနှင်နိုင်သော မော်တော်ကားတစ်စီးရှိသည်။ ထိုယာဉ်အချို့သည် အချို့သောလုပ်ငန်းဆောင်တာများအတွက် ပိုသင့်လျော်သည်မှာ မှန်ပါသလော။ မေးတာ။ မေးစရာက ဘာတာဝန်ကို ကျေပွန်အောင် ကြိုးစားနေတာလဲ။
အကယ်၍ သင်သည် အသုံးပြုသူတစ်ဦးအား Compendium နှင့် open-source blogging ပလပ်ဖောင်းတစ်ခုခုနှင့် ဘေးချင်းကပ်ထားပါက Compendium ဘလော့ဂ်ရှိ ပို့စ်သည် ပို့စ်များသည် စကားလုံးတစ်လုံးနှင့်တစ်လုံး ထပ်တူထပ်မျှဖြစ်နေလျှင်ပင်၊ အဲဒါက မင်းကုမ္ပဏီအတွက် အရမ်းတန်ဖိုးရှိတယ်။ ဤအသုံးပြုမှုကိစ္စသည် ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်ပါက၊ ၎င်းသည် CB အတွက် အံ့သြဖွယ်ကောင်းသော အရောင်းရဆုံးအချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။
ဒါပေမယ့် ဆန်းစစ်ကြည့်ရအောင် အဘယ်ကြောင့် ဒီပို့စ်တစ်ခုတည်းက အသွားအလာပိုများလာမယ်။ အကြောင်းရင်းမှာ အများအားဖြင့် Compendium ကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကုမ္ပဏီ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေသော ဗျူဟာတစ်ခုရှိသည်။ သင်သည် codebase ကို အချိန်တိုင်း အပ်ဒိတ်လုပ်နေပါသည်။ ၎င်းတို့ကို ဂုဏ်သတင်းတည်ဆောက်ရာတွင် ကူညီရန်အတွက် သင်သည် သုံးစွဲသူများ၏ ပို့စ်များနှင့် ချိတ်ဆက်နေပါသည်။ သင်သည် ဖောက်သည်များနှင့် တွေ့ဆုံပြီး အပိုသင်တန်းများနှင့် အရင်းအမြစ်များကို ပံ့ပိုးပေးသည်။ သင်သည် အလွန်ယုံကြည်စိတ်ချရသော အခြေခံအဆောက်အဦများကို ထိန်းသိမ်းထားသည်။ များသောအားဖြင့်၊ Compendium ၏ အခမဲ့ကိရိယာတစ်ခုထက် အားသာချက်အများစုမဟုတ်ပါက သင်၏ဆော့ဖ်ဝဲ၊ သင့်ဖောက်သည်များနှင့် ၎င်းတို့၏အကြောင်းအရာအတွက် သင်ပံ့ပိုးပေးနေသည့် လက်ရှိဝန်ဆောင်မှုနှင့် ပံ့ပိုးမှုဖြစ်သည်။
ထို့အပြင်၊ ၎င်းသည် အံ့သြဖွယ်ကောင်းသော အကျိုးကျေးဇူးဖြစ်ပြီး သင့်ဖောက်သည်အများအပြားသည် အလွန်ပျော်ရွှင်ကြသည်။ သို့သော် ၎င်းသည် သင့်ဆော့ဖ်ဝဲနှင့် ဟာ့ဒ်ဝဲ "ဘလော့ဂ်ပလပ်ဖောင်း" ၏ အခြေခံအစိတ်အပိုင်းမဟုတ်ပါ။ မတူညီသောဆော့ဖ်ဝဲလ်ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် တူညီသောရလဒ်ကို သင်ရရှိနိုင်သည် (သို့သော် ၎င်းသည် ပို၍အလုပ်ဖြစ်လိမ့်မည်!) ဤအရာသည် ကုမ္ပဏီများကို ကြိုက်နှစ်သက်သည့်အရာဖြစ်သည်။ DK New Media နေ့တိုင်းလုပ်ပါ။ ကော်ပိုရိတ်ဘလော့ဂ်ရေးခြင်းအတွက် ဆုံးဖြတ်ချက်ချရာတွင် ပါဝင်သူတိုင်းသည် ဤကွဲပြားချက်များကို နားလည်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
ဤနေရာတွင် အခြေခံပြဿနာမှာ ဌာနတစ်ခု၏ တာဝန်ပြီးဆုံးသွားပြီး အခြားသူတစ်ဦး၏တာဝန်ကို စတင်သည့်နေရာဖြစ်သည်။ ထိုမေးခွန်းအတွက် လွယ်ကူသော အဖြေမရှိပါ။ ပိုဆိုးသည်မှာ၊ ထိုလိုင်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုခုသည် ကုမ္ပဏီပြင်ပရောင်းချသူထံသို့ ဖြတ်သွားပါက၊ အဖွဲ့အစည်းများကြားတွင် မှုန်ဝါးဝါးနေရာလွတ်များရှိလာပြီး အန္တရာယ်များနှင့် အကျိုးကျေးဇူးများကို အကဲဖြတ်ရန် ပိုမိုခက်ခဲလာပါသည်။ ပြင်ပလူများ ဝင်ရောက်ခွင့်ရပါက သင့်ပတ်၀န်းကျင်ကို မည်သို့ကာကွယ်မည်နည်း။ သို့မဟုတ်၊ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဘက်မှ- ပြင်ပပလပ်ဖောင်းပံ့ပိုးပေးသူသည် သင့်အမှတ်တံဆိပ်ကို ပျက်စီးစေမည်မဟုတ်ကြောင်း သင်မည်သို့သေချာသနည်း။ ဤအန္တရာယ်များသည် သေးငယ်သည် သို့မဟုတ် ကြီးမားသော်လည်း ၎င်းတို့သည် သုညမဟုတ်ပါ။
နည်းပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တော်တော်များများဟာ လုပ်ငန်းအပေါ် သက်ရောက်မှုတွေကို လုံလောက်တဲ့ လေးစားမှုမရှိဘဲ IT က လုပ်ဆောင်တာ သေချာပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပြဿနာက နှစ်မျိုးလုံးသွားပါတယ်—စီးပွားရေးသမားတွေက IT အကြောင်း ပိုနားလည်ဖို့ လိုပြီး အပြန်အလှန်အားဖြင့်။ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး ဆန့်ကျင်ဘက်ပြုမည့်အစား အတူတကွလုပ်ဆောင်ခြင်းသည် လူတိုင်းအတွက် အကျိုးရှိမည်ဖြစ်သည်။
10:2009 pm တွင်ဇူလိုင်လ 4, 48
ဒီရှင်းလင်းချက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Robby။ နောက်ဆုံး မှတ်ချက်များအတိုင်း ရပ်တည်ပေးပါ့မယ်။ ကျွန်ုပ်သည် ကျွန်ုပ်၏ IT အရင်းအမြစ်များကို ကျွန်ုပ်၏ အကြံပေးများအဖြစ် ယုံကြည်ပါသည် ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်သည် မိုက်မဲသောအရာကို မလုပ်ပါနှင့်။ သို့သော်လည်း၊ လုပ်ငန်းကို ရှေ့သို့တိုးရန် အကောင်းဆုံးအကျိုးရှိမည့် ပလပ်ဖောင်းများနှင့် ဗျူဟာများပေါ်တွင် နောက်ဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်ကို ကျွန်ုပ်မပေးပါ။ ကျွန်ုပ်တို့တစ်ဦးစီတွင် ကိုယ်ပိုင်အားသာချက်များရှိပြီး ၎င်းတို့အား သင့်လျော်စွာ အသုံးချရန် လိုအပ်သည်။